Iingelosi eziLondolozayo: Ngubani ongowam kwaye ndingaqhagamshelana njani nabo? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ngubani iNgelosi yakho ekuLondolozayo? Chonga okwakho ngomhla wakho wokuzalwa
Ingelosi yakho ekuGcinayo ikukhapha ubomi bakho bonke, kodwa uyazi ukuba ngubani owakho? Funda amagama abo kunye neendlela ezisetyenziselwa ukubiza kunye nokunxibelelana nabo.
Umkhuseli wakho ovela kuThixo uhlala ekuthumela imiyalezo kwaye akuncede wenze ukhetho olufanelekileyo ecaleni kwendlela yakho. Ngelixa ungaziva ngathi ubazi ngokungazi, ubusazi ukuba ungabanqwenela neengcebiso kunye nezikhokelo? Ngaba uyafuna ukudibana neNgelosi yakho enguMgcini; lo ebekujongile ukusukela ekuzalweni kwakho? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ngokusebenzisa nje umhla wokuzalwa kwakho, unokufumana igama leNgelosi yakho, ufunde indlela yokubabiza kwaye ufumane indlela yokucela uncedo lwabo. Lixesha lokuba ufumane okuninzi malunga nesikhokelo sakho somoya ekubonelela ngaso.
Sebenzisa umhla wakho wokuzalwa ukuze ufumane isikhokelo sakho esivela kuThixo
Yintoni iNgelosi yoMgcini?
Uluntu luhlala lujikela kubukrelekrele obuphezulu xa ujongene nokwenza izigqibo ezibalulekileyo zobomi. Imvelaphi yeeNgelosi eziGadayo ibuyela kwezona zithethe zakudala zeKabbalistic, kodwa zisasilawula nanamhlanje. Ukufumanisa igama lomkhuseli wethu kuthetha ukufumanisa ukuba singobani kanye kanye kwaye kusigcinele ntoni…
-Fumanisa eyakho 2021 horoscope uqikelelo apha -
Guardian Angel sokubala ngokusekelwe kumhla wokuzalwa kwakho: Cofa kwinyanga yakho yokuzalwa apha ngezantsi
Zingaphi iiNgelosi eziKhuselekileyo? Kukho ezingama-72 xa zizonke. Cofa kwinyanga yakho yokuzalwa Angel ukufumanisa ukuba ungubani na kwaye ufunde ukubabiza ngokuthi ucofe igama labo.
EyeKhala EyeThupha EyoMsintsi EyeDwarha EyeNkanga
Inyanga yokuzalwa Ingelosi:
Ingelosi yakho ekuMgcini ngu: (cofa kwigama labo ukufumana umthandazo)
EyoMqungu Ngomhla woku-1-5 kaJanuwari Nemamiah
6th - 10 kaJanuwari Eweialel
I-11th-15 kaJanuwari Harael
16th - 20 kaJanuwari Mitzrael
21 - 25 kaJanuwari Umabel
26th-30 kaJanuwari Ewe Ndinceda
31 Januwari-4 Februwari Anauel
EyoMdumba 5th - 9 kaFebruwari UMehiel
I-10th-14th kaFebruwari UDamabiah
I-15th-19 kaFebruwari IManakel
I-20 - 24 kaFebruwari UEyael
Ngomhla wama-25 ukuya kowama-29 kuFebruwari UHabuhiya
EyoKwindla Ngomhla woku-1 ukuya kowesi-5 kuMatshi URakeli
6th - 10th Matshi Yabamiah
I-11th-15th kaMatshi I-Haiaiel
16th - 20 Matshi Umamiah
21 - 25 Matshi UVehuiah
26th-30th ka-Matshi UJeliel
31 Matshi-4 Epreli USitael
UTshazimpuzi 5 ukuya ku-9 ku-Epreli UElemiah
I-10th-ye-14 ka-Epreli Umnqweno omhle
I-15th-20 ka-Epreli Lelahel
21 - 26 Epreli UAkaya
I-27th-30 ka-Epreli ICahetel
UCanzibe Eyoku-1 ukuya kweyesihlanu ngoMeyi Haziel
6th - 10 Meyi UAladiah
I-11th-ye-15 kaMeyi Lauvuel
16 - 21 Meyi Hahaiah
22nd - 26 Meyi Yezalel
I-27th-yama-31 kaMeyi Mebahel
Isilimela Ngomhla we-1 ukuya ku-5 kaJuni Hariel
6th - 10 kaJuni UHekamiya
I-11th-ye-15 kaJuni Lauviah
16 - 21 kaJuni Caliel
22nd - 26 kaJuni leuviah
27th - 1 Julayi Pahaliah
EyeKhala Ngomhla we-2 - 6 kaJulayi Nelchaël
7th - 11 kaJulayi Ewe
I-12th-16 kaJulayi UMella
17th - 23 kaJulayi Haheuiah
I-24 ukuya kwi-27 kaJulayi UNitaya
Ngomhla wama-28 kuJulayi-nge-1 ka-Agasti Haaiah
EyeThupha Ngomhla wesi-2 - 6 ku-Agasti Yeratel
I-7 - 12 ka-Agasti Uyabona
13th-17 Agasti Reiyel
18 - 23 Agasti UOmael
24th - 28 Agasti ULecabel
29 Agasti - 2 Septemba UVasariya
EyoMsintsi Ngomhla we-3 - 7 kaSeptemba Ewe
8th - 12th kaSeptemba UHahaya
13th - 17 Septemba Chavaquiah
18th - 23 Septemba UMenadel
24th - 28 Septemba UAniel
I-29th kaSeptemba-3rd ka-Okthobha Haamiah
EyeDwarha I-4 - 8 ka-Okthobha Rehael
I-9th-13 ka-Okthobha Leyiyeli
I-14th-ye-18 ka-Okthobha Hahahel
19 - 23 Oktobha UMikayeli
I-24th-28th ka-Okthobha UVeuliah
Nge-29ti ka-Okthobha-nge-2 ka-Novemba UYelaiah
EyeNkanga Ngomhla wesi-3 - 7 kuNovemba Sehaliah
8th - 12th kaNovemba Intsingiselo
13th - 17th kaNovemba UAsaya
18 - 22 Novemba UMichael
I-23rd-27th kaNovemba Vehuel
28th November - 2 December UDaniel
EtiMnga Ngomhla wesi-3 ukuya ku-7 kuDisemba Hahasiah
8th - 12th kaDisemba Ulawulo
13th - 16th kaDisemba UNanael
17th - 21 Disemba Nithael
22nd - 26 Disemba Mebahiah
I-27th-31 kaDisemba IPoyel
Umahluko unokwenziwa phakathi kweengelosi ezingama-72 ezilondoloziweyo ezidityanisiweyo kwikhalenda yeengelosi. Ngapha koko, njengemiqondiso ye-zodiac etshintsha rhoqo ngenyanga, iingelosi zitshintsha rhoqo kwiintsuku ezintlanu. Ewe kunjalo hambisa amandla kwaye akusikelele ngeempawu ezongeza kubuntu bakho. Bayakuvumela ukuba uqhubele phambili ngoxolo ebomini, kodwa ukuze yenzeke lonto kufuneka ufumane igama labo kwaye ubazi ngokwenene.
-Kutheni ungakhe ujonge ukuba ngubani u-Amenadiel? -
Zintoni iiNgelosi eziLondolozayo kwaye zenza ntoni?
Basebenza njengabathunywa abamele amagunya aphezulu, ngenene basebenza phakathi kwezulu nomhlaba. Umsebenzi wabo kukusinceda kwaye sihambe nabo kubo bonke ubomi bethu, ukuze sikwazi ukuphila ubomi ngokusemandleni ethu. Sonke sinesikhokelo esisekwe kumhla nakwinyanga esizalwe ngayo. Yonke ingelosi kaThixo ifuzisela amandla, njengokuzimisela, umonde, okanye nokuzingisa. Bayakukhusela yonke imihla kodwa bangaze bazivelele ngokwabo ngokwasemzimbeni, oko kuthetha ukuba kubonakala kungaqhelekanga, ngakumbi ukuba uhambelana kakhulu namagunya aphezulu kwaye uyazi ngokomoya. Zibonakala ngokufihlakeleyo kwaye zidlulise umyalezo ngesimboli, umzekelo, ngenani leengelosi kunye neeyure zesipili.
Umkhuseli wakho uzibonakalisa ngokuzenzekelayo kwiimeko ezizodwa zobomi bakho, kodwa kunokwenzeka ukuba unxibelelane nengelosi yakho ngqo okanye nomnye umntu ukuba uziva ufuna ukwenza njalo. Kuyo yonke into ekufuneka uyazi ngeengelosi, yazi ukuba zizizo uyakwazi ukwenza izicelo zakho kuyo nayiphi na indawo ebomini bakho kwaye ungenelele kuyo. Ukwazi amagama abo kunokuba luncedo kakhulu ekunxibelelaneni nabo kwaye kuya kulungiselela ungenelelo lwabo ebomini bakho.
>>> Ngoku ukuba ufumene ukuba ngubani u-Guardian Angel wakho, lixesha lokuba uhambe inyathelo elinye ukuya phambili kwaye Bala inombolo yeNgelosi yakho uze ufumane igama lakho Ingelosi enkulu . Kutheni ungajonganga izidalwa ezilula nawe?
Iingcebiso zokuSusa malunga nendlela yokutsala abantu besebenzisa imiqondiso yabo yeZodiac
Athini amanani angama-888
Indlela yobomi yenombolo 5 kunye no-5 yokuhambelana
Intsingiselo yenani leengelosi ezingama-666
ndibona i-666 kuyo yonke indawo
Ngubani oza kuba liqabane lam lobomi ngomhla wokuzalwa
ingcuka ifuzisela ntoni